Guddiga ilaalinta Anshaxa Doorashada oo eedaymo u jeediyay Telefishanka Qaranka | Xarshinonline News
Guddiga ilaalinta Anshaxa Doorashada oo eedaymo u jeediyay Telefishanka Qaranka
Posted by xol2 on June 14, 2010 · Leave a Comment
Hargeysa (Nnn)- Guddiga ilaalinta iyo kormeerka Anshaxa doorashada Madaxtooyada Somaliland, ayaa eedayn u jeediyay Telefishanka Qaranka.
Sida lagu sheegay warsaxaafadeed Guddigu shalay ka soosaareen Hargeysa, Telefishanka Qaranku waxa uu ku xadgudbay xeerka hab-dhaqanka anshaxa doorashada, waxayna ku eedeeyeen inuu la saftay xisbiga talada dalka haya ee UDUB.
Waxay sheegeen in aanu fursad siinin xisbiyada Mucaaradka iyo taageerayaashooda, taas bedelkeedana uu Telefishanku waqti badan oo baahinta barnaamijyadiisa ah u hibeeyay xisbiga UDUB.
Warsaxaafadeedkaas oo uu ku saxeexan yahay guddoomiyaha Guddiga ilaalinta anshaxa doorashada Mr. Axmed Maxamed Cadaad, laguna socodsiiyay Agaasimaha Telefishanka SLNTV Mr. Maxamed Muuse Diiriye, waxa uu u dhignaa sidan; “Mudane Maareeye guud, anigoo ah guddoomiyaha Guddiga ilalinta anshaxa iyo habsami-socodka Doorashooyinka Qaranka Somaliland, waxay iila muuqataa ama aan kuu caddaynayaa inaanad sidii la rabay u fahmin ama aanad ugu dhaqmin waraaqdii hore ee aan soo diray, taasoo si faahfaahsan u sharaxaysay sida Warbaahinta Qaranka ay ugu siman yihiin Xisbiyada Qaranka inta lagu gudo jiro ololaha doorashada Madaxtooyada.
Xeerka ugu muhiimsan ee la doonayo in lagu dhaqangeliyo Warbaahinta Qaranku, waxay tahay in loo sinaado dhammaan barnaamijyada iyo qoraalada la baahinayo si isle’eg oo xisbi walba helo caddaalad iyo sinnaan inta lagu gudo jiro ololaha doorashooyinka.
Waxa xusid mudan, in Telefishanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland aanu ku dhaqmin dhammaan shuruudihii looga baahnaa, kaasoo aan fursad isle’eg siin xisbiyada kale oo xisbigiisa UDUB oo keliya siiyo fursad aad uga badan xisbiyada kale. Sidoo kale, si lid ku ah habka anshaxa, Telefishanka Qaranku fursad ma siiyo xisbiyada Mucaaradka ah iyo taageerayaashooda.
Haddaba, tan iyo intii aanu kuu soo diray farriintii hore, aad baanu ula soconay barnaamijyada aad tabisaan. Waxaanu aad uga xunahay in Telefishanka Qaranku aanu ku dhaqmin talooyinkii ay heleen. Waxaan dareensan nahay in haba yaraatee waxba aanay iska bedelin sida loogu tabiyo daawadayaasha ololaha doorashada, waxaana si cad u maqan ku dhaqanka xeerka Anshaxa iyo shuruucdiisa.
Haddaba, waxa nagu waajib ah inaan ku dareensiiyo inuu jiri karo ciqaab ay mutaysanayso cidii ku xadgudubta xeerka anshaxa.
Qodobkani wuxuu muhiimad aasaasi ah u leeyahay muwaadiniinta reer Somaliland ee ka qaybqaadanaya doorashada. Waxaanu u madaxbanaanahay in aan warqadan u bandhigno ama u baahino dadweynaha, taasoo ay ku lifaaqan tahay warqadii aan hore idiinku soo dirnay.”
← Warsaw: Basaas ka tirsan Sirdoonka Yuhuudda ee MOSSAD oo loo xidhay dilka hoggaamiyihii garabka hubaysan ee Xamaas
Hargeysa: Xisbiga KULMIYE Oo Xafiis Muhiim Ah Ka Furtay Xaafada Gacan-libaax Ee Magaalada Hargeysa →